Izindaba - Izinto Ezijwayelekile Mayelana Ne-Welding Electrode
I-electrode ye-Tianqiao Welding iyindlela yokukhetha
Ama-electrode wokushisela abalulekile, futhi kubalulekile ukuthi umshiseli osebenzayo kanye nabasebenzi abafanele bazi ukuthi yiluphi uhlobo abalusebenzisela imisebenzi ehlukile.
Ayini ama-electrode wokushisela?
I-electrode iyinsimbi eboshwe ngocingo, eyenziwe ngezinto ezifana nensimbi eboshelwayo. Okokuqala, kukhona ama-electrode angasetshenziswa futhi angasetshenziswa. Ku-welding arc welding (SMAW) eyaziwa nangokuthi induku, ama-electrode ayasebenziseka, okusho ukuthi i-electrode iyasetshenziswa ngenkathi isetshenziswa futhi iyancibilika nge-weld. Ku-Tungsten Inert Gas welding (TIG) ama-electrode awadleki, ngakho-ke awancibiliki futhi abe yingxenye ye-weld. Nge-Gas Metal Arc Welding (GMAW) noma i-MIG welding, ama-electrode ahlinzekwa ngokuqhubekayo ngocingo. 2 Ukushisela i-arc oku-cored arc kudinga i-electrode eqhutshwa ngokudla eqhubekayo equkethe ukugeleza.
Ungayikhetha kanjani i-welding electrode?
Ukukhetha i-electrode kunqunywa izidingo zomsebenzi wokushisela. Lokhu kufaka phakathi:
Kukhona ama-electrode akhanyayo futhi asindayo. Ama-electrode afakwe ukukhanya anokumboza okulula okusetshenziswa ngokuxubha, ukufafaza, ukucwilisa, ukuwasha, ukusula noma ukuwa. Ama-electrode ashubile ahlanganiswe ngokukhishwa noma ngokuvuza. Kunezinhlobo ezintathu eziyinhloko zokumbozwa okusindayo: amaminerali, i-cellulose, noma inhlanganisela yakho kokubili. Izindwangu ezisindayo zisetshenziselwa ukushisela insimbi yensimbi, izinsimbi, nezindawo ezinzima.
Zisho ukuthini izinombolo nezinhlamvu kuzinti zokushisela?
I-American Welding Society (AWS) inohlelo lokufaka izinombolo olunikeza imininingwane nge-electrode ethile, njengokuthi yiluphi uhlelo lokusebenza olusetshenziselwa kangcono nokuthi lusetshenziswe kanjani ukuze lusebenze kahle kakhulu.
Idijithi Uhlobo Lokumboza Zokushisela yamanje
0 I-sodium ephezulu ye-cellulose DC +
1 I-cellulose potassium ephezulu AC, DC + noma DC-
2 I-titania ephezulu ye-sodium AC, DC-
3 I-titania ephezulu ye-titanium AC, DC +
4 I-iron powder, i-titania AC, DC + noma DC-
5 I-hydrogen sodium ephansi DC +
6 I-hydrogen potassium ephansi AC, DC +
7 I-iron oxide ephezulu, i-potassium powder AC, DC + noma DC-
8 I-hydrogen potassium ephansi, i-iron powder AC, DC + noma DC-
I- “E” ikhombisa i-arc welding electrode. Amadijithi amabili okuqala enombolo enamadijithi ama-4 nezinombolo ezintathu zokuqala ezinombolo enezinombolo ezi-5 zimele ukuqina. Isibonelo, i-E6010 isho amakhilogremu angama-60,000 ngamasentimitha ayisikwele (PSI) amandla wokuqina futhi i-E10018 isho amandla we-psi tensile ayi-100,000. Idijithi elandelayo yenombolo yokugcina ibonisa isikhundla. Ngakho-ke, u- “1” umele i-electrode yonke yokuma, “2” nge-elektrode eyisicaba futhi evundlile, kanye no “4” nge-elektrode eyisicaba, enezingqimba, emi mpo nangaphezulu. Amadijithi amabili wokugcina acacisa uhlobo lokumboza kanye ne-welding yamanje. 4
I-electrode Amandla eqine Isikhundla Uhlobo esinemthombo & yamanje
Ukwazi izinhlobo ezahlukahlukene zama-electrode nokusetshenziswa kwazo kuyasiza ukwenza umsebenzi wokushisela ngendlela efanele. Ukucatshangelwa kufaka phakathi indlela yokushisela, izinto ezibunjiwe, izimo zangaphakathi / zangaphandle, nezindawo zokushisela. Ukuzijayeza ngezibhamu ezahlukahlukene zokushisela nama-electrode kungakusiza ukuthi unqume ukuthi iyiphi i-electrode ongayisebenzisela yiphi iphrojekthi yokuwelda.